के देवी देवता हरुलाई निर्दोष प्राणी को बलि चाहिएको हो त ? आखिर कहिले सम्म बलि प्रथाको नाममा पशुको हत्या चली रहने हो ? भिडियो आफै बोल्छ ?? हेर्नुहोस शेयर गर्नु होस् एकछिन तपाईको मुटुको धड्कन पक्कै पनि बढ्ने छ….. - Enepalese.com
के देवी देवता हरुलाई निर्दोष प्राणी को बलि चाहिएको हो त ? आखिर कहिले सम्म बलि प्रथाको नाममा पशुको हत्या चली रहने हो ? भिडियो आफै बोल्छ ?? हेर्नुहोस शेयर गर्नु होस् एकछिन तपाईको मुटुको धड्कन पक्कै पनि बढ्ने छ…..
कसरी रोकिन्छ बली प्रथा, रागाँ र पाडा यसरी काटिन्छन कोटहरुमा Gulmi Ghamir Dashani Mela 2074 गुल्मी जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र नम्बर ३ अन्र्तगत मालिका गाउपालिकामा ७ साबिकको घमिर गा.बि.स.मा हरेक बर्षको दशैको बेला भब्य मेला लाग्ने गर्दछ । यस बर्ष पनि उक्त क्षेत्रमा कोटमा बली दिदैं सराय खेल्दै दशैं मेला सकिएको छ । उल्लेखिनिय संख्यामा दर्शक तथा भक्तजनको उपस्थिति रहने मेलामा त्यस क्षेत्रमा बिभिन्न ठाँउहरुबाट मानिसहरु दर्शनको लागी आउने गर्दछन । हामीले रोजगारी र कामको शिलशिलामा घर देश देखि टाढा रहनुहुने महानुभावहरुलाई मध्यनजर गदै यो भिडियो तयार पारेका छौ । अब हेरौ यात्रा अनलाईन सहकर्मी सफल सहयोगी लम्सालले तयार पार्नुभएको सोही ठाँउका केही रमाईला भिडियोहरु । यो भिडियो कपी गरेर अन्यत्र कतै अपओड गर्न तथा पुन: प्रयोग गर्न पाइनेछैन, यद्दपी तपाईंलाई मन पर्यो भने शेयर गर्न नभुल्नुहोला । महेश बोहरा को सहयोगमा
२०७४ असोज २५ गते १५:२० मा प्रकाशित